समाचार - एक छत अपरेटिंग लाइट कम फ्लोरको उचाइको साथमा वा ओरा कोठामा स्थापना गर्न सकिदैन?
एक छत अपरेटिंग लाइट कम फ्लोरको उचाइको साथमा वा ओरा कोठामा स्थापना गर्न सकिदैन?
धेरै वर्षको बिक्री र उत्पादन अनुभवमा हामीले पत्ता लगायौं कि खरीद गर्दा केही उपभोक्ताहरू धेरै भ्रमित छन् अपरेटिंग लाइट.
तेसका लागि छत अपरेटिंग प्रकाश, यसको आदर्श स्थापना उचाई २.9 मिटर छ। तर जापान, थाईल्याण्ड, इक्वेडर वा केही अफ्रिकी देशहरूमा उनीहरूका अपरेटिंग थिएटरहरू २.9 मिटर उचाई भन्दा कम छन्। तिनीहरूले छत स्थापना गर्न सक्दैनअपरेटिंग लाइट?
यहाँ हामी स्थापना उचाई को बारे मा एक प्रश्न लोकप्रिय बनाउन आवश्यक छ, र हामीले एक ग्राहक अर्डर लिनु अघि पुष्टि गर्नु पर्छ। तथाकथित स्थापना उचाइ, अर्थात् भुँईको उचाईले सजावटको छतबाट जमीनमा उचाइलाई जनाउँछ, छतबाट भुइँमा उचाईलाई होइन। अवश्य पनि, केहि अपरेटिंग कोठाहरू छन् जुनसँग यस सजावटी छत छैन। यस प्रकारको अपरेटिंग कोठाको लागि, यसको स्थापना उचाइ छतदेखि जमीनसम्मको दूरी हो।
फेरी शीर्षकमा, हामीसँग २० बर्ष पछि पेशेवर अपरेटिंग लाइट आपूर्तिकर्ताको रूपमा कस्तो समाधानहरू छन्। कृपया म र मेरो नयाँ ग्राहक इक्वेडर बीच बिक्री प्रक्रिया जाँच गर्नुहोस्।
ग्राहक एक पशु चिकित्सा क्लिनिक को लागी एक डबल हेड एलईडी अपरेटिंग प्रकाश खरीद गर्दै छ। अर्डर राख्नु अघि, मलाई उसको स्थापना उचाइ प्रदान गर्न आवश्यक छ। तलको चित्र ऊँचाइ मापन प्रक्रिया हो जुन उसले फिर्ता पठाएको थियो।
अन्तमा यो पुष्टि हुन्छ कि भुईको उचाई २.6 मीटर मात्र हो, जसले २.9 मिटरको मानक उचाई आवश्यकता पूरा गर्दैन।
डाक्टरहरूको सामान्य उचाई र अपरेटिंग टेबलको उठाइएको उचाई विचार गरेपछि, हामीले एक अनुकूलित स्थापना योजना अपनाउने निर्णय ग .्यौं।
हामीले बत्ती होल्डरलाई पुन: डिजाइन गर्‍यौं र ग्राहकहरूलाई पुष्टि गर्न रेखाचित्र बनायौं। ग्राहक हाम्रो डिजाइन योजना गर्न सहमत।
सामानहरू प्राप्त गरिसकेपछि र केही समयको लागि प्रयोग गरेपछि ग्राहक एकदम सन्तुष्ट हुन्छ।
पछि, आफ्नो नयाँ अपरेटिंग कोठामा जाँदा, उनका डाक्टर मित्रले एक दोहोरो टाउको भएको एलईडी पुनःक्रमित गरे अपरेटिंग लाइट
यहाँ, म पशु चिकित्सकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु जसले मलाई संदर्भित गरे। यो हाम्रो भरपर्दो उत्पादनहरू हुनुपर्दछ र विचार-बिक्री पछि सेवाले चिकित्सकहरूलाई सार्यो।
यस सञ्चार केस मार्फत हामी जान्दछौं कि २.6 मीटर उचाईको अपरेटिंग कोठामा अझै पनि छत स्थापनाको सर्तहरू छन् अपरेटिंग लाइट
तर त्यहाँ केहि थप केसहरू छन्, जस्तै अपरेटिंग कोठाको उचाई केवल २.4 मीटर मात्र हो, यस अवस्थामा हामी सिफारिस गर्दछौं ग्राहकहरू भित्ता-प्रकारको प्रयोग गर्नुहोस्। अपरेटिंग लाइट वा मोबाइल अपरेटिंग लाइट
तल हामीसंग सन्दर्भका लागि स्थापना रेखाचित्रहरू पनि छन्।
हलोजन ओटी लाइटको युगदेखि एलईडी ओटी प्रकाशसम्म, हाम्रो कम्पनीले देश र विदेशमा सर्जिकल लाइटहरूको डिजाइन, उत्पादन र स्थापनामा करीव २० बर्षको अनुभव रहेको छ।
तसर्थ, एक ग्राहक को रूप मा, यदि तपाईं को बारे मा कुनै प्रश्न छ अपरेटिंग लाइट, तपाइँ हामीलाई सोधपुछ पृष्ठमा परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ, हामी यसलाई समाधान गर्न पाउँदा खुसी छौं।
जे भए पनि त्यहाँ कुनै सम्झौता छैन, यो मूल्यवान संचार अनुभवले हामीलाई भविष्यको बिक्री प्रक्रियामा अझ राम्रा योजनाहरू बनाउन मद्दत गर्दछ।